ट्याग: ईआरपी | Martech Zone
बुधबार, डिसेम्बर 16, 2015 बुधबार, डिसेम्बर 16, 2015 चिप हाउस
२०१ 2016 B2B ग्राहकको वर्ष हुनेछ। सबै उद्योगहरूका कम्पनीहरूले निजीकृत, ग्राहक केन्द्रित सामग्री वितरण गर्ने र खरीददारहरूको प्रतिक्रियालाई प्रासंगिक रहनको आवश्यकताको महत्त्व बुझ्न थालेका छन्। B2B कम्पनीहरूले युवा उत्पादनको खरीददारहरूको B2C- जस्तो किनमेल ब्यवहारलाई खुशी पार्न आफ्नो उत्पादन मार्केटिंग रणनीतिहरू समायोजन गर्न आवश्यकता पाइरहेका छन्। फ्याक्सहरू, क्याटलगहरू, र कल सेन्टरहरू B2B संसार भित्र अदृष्य हुँदै गइरहेका छन् किनकि ई-कॉमर्सले ग्राहकको परिवर्तन गर्ने आवश्यक ठेगानालाई राम्रोसँग विकास गर्दछ।
मङ्गलबार, डिसेम्बर 23, 2014 सोमबार, डिसेम्बर 29, 2014 Douglas Karr
२०१ 2014 मा आउँदै गरेको सम्भवत एक सबैभन्दा मुख्य हाइलाइट्स भनेको कम्पनीहरूले ग्राहकको यात्रामा नजिकबाट हेर्न थालेका थिए। तपाइँका उत्पादनहरू कसरी अनलाइन खोजी भइरहेको छ? तपाइँ कसरी सम्भावितलाई खोजीबाट रूपान्तरण मार्फत अग्रसर गर्दै हुनुहुन्छ? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूसँग अझ बहुमूल्य सम्बन्ध कायम राख्न र निर्माण गर्न तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? सेल्सफोर्स मार्केटि Cloud क्लाउडले पत्ता लगायो कि-mar% वरिष्ठ-स्तर मार्केटर्स सहमत छन् कि एकसँग
एकदमै गाह्रो वा महँगो प्रभाव गर्न कारकहरू मध्ये एक तपाईंको साइट लोड हुने वेगमा गति हो। यो मार्टेकमा यहाँ एक निरन्तर लडाई हो ... सामाजिक एकीकरण र विज्ञापन पृष्ठ लोड समय ढिलो हुन्छ, तल डाउन गर्नुहोस् ताकि हामी यसलाई सँधै धेरै माध्यमहरू मार्फत ट्युन गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ कि हामी यसमा केही आगन्तुकहरू गुमाउँछौं - विशेष गरी यदि त्यहाँ धेरै यातायात छन्। केही कम्पनीहरूले लोड समय लिदैनन्